Te-Hanolo Ireo Mpanoratra Gazety Ao Amin’ny Parlemanta Ireo Mpanao Lalàna Ogandey · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2015 2:55 GMT
Vavahady fidirana ao amin'ny Antenimieram-pirenena Ogandey. Sary navoakan'i Andrew Regan tamin'ny alalan'ny Creative Commons.
Mieritreritra volavolan-dalàna hanolo ireo mpanoratra gazety rehetra nitatitra ny raharaha parlemantera talohan'ny 1 Mey 2010 ireo mpanao lalàna Ogandey “mba ho tombotsoan'ny fifandanjan'ny fitateram-baovao” .
Grace Natabaalo, mpanoratra gazety Ogandey malaza nizara ny taratasy manontolo tao amin'ny Twitter:
Kasain'ny parlemanta ao Oganda hosoloina ireo mpanoratra gazety mpitati-baovaon'ny antenimieram-pirenena mihoatra ny 5 taona
Nanafintohina ireo Ogandey maro ny fikasana hanolo ireo mpanoratra gazety zokiolona manana traikefa goavana amin'ny politikan'ny fanaovan-dalàna.
Niantso ny fanapaha-kevitra ho “fahadalana” i Bernard Tabaire:
Tokony hiverina amin'ny fanapahan-keviny adala tsy misy hatak'andro mikasika ny fandroahana ireo mpanoratra gazety izay nitati-baovao momba azy nandritra ny 5 taona ny parlemanta.
Ny hafa, tahaka an'i Kemigisa Jacky, mafana fo amin'ny media sosialy nanasokajy izany ho toy ny fanararaotam-pahefana.
Tontosa 100% ny fanararaotam-pahefana nataon'ny parlemanta !! Tian'ny vaomiera parlemantera tarihin'i Kadaga hivoaka ireo mpanao gazety nitati-baovao tao nandritra ny 5 taona.
Maro ny olona mitaky valiny. Morrison Rwakakamba, mpanadihady momba ny politikam-panjakana sy Filoha Tale Jeneralin'ny Agency for Transformation (Sampan-draharaha Hoan'ny Fanovana) nanontany hoe:
Tokony hamela malalaka ireo mpanoratra gazety ny Parlemanta. Inona izany Antenimieram-pirenena manafina an-dRamatoa Mpitondra teny izany?
Dan Mumbere, mpanolotra fandaharana ao amin'ny fahitalavitra Urban nisioka hoe:
Loto ohatrinona no voaangon'ny mpanoratra gazetin'ny parlemanta ao anatin'ny 5 taona? Izany no tantara tiako ho fantatra
Nilaza kosa i Grace Natabaalo fa tokony ny tokantranony aloha no diovin'ny parlemanta fa tsy ny hafa :
Tokony handroaka ireo solombavambahoaka mpingitrika ny parlemanta
Nampiseho ny tatitry ny parlemantera nivoaka tamin'ny herintaona fa “fivoriana latsaky ny 10 tamin'ireo fivoriana 60 nantenaina atrehiny tamin'ny fivoriana ara-potoana sy ny vaomiera maharitra tao anatin'ny 7 volana” no mba natrehin'ny ankamaroan'ireo solombavambahoaka”
Taorian'ny fahatafintohinan'ny vahoaka, nanazava ny toe-draharaha ny filoha lefitra Ogandey Jacob Oulanyah fa nisy ny taratasy fanasana nalefa hoan'ireo tonian-dahatsoratry ny gazety isankarazany hiresaka ny amin'ny mbola volavolan-dalàna avy amin'ny vaomiera parlemantera.